Isitayela | May 2022
Ama-sneaker okuya kuwo uMeghan Markle Asephulelo esingu-30% Njengamanje
Ngemuva kokubona uMeghan Markle egqoke amateki amaVejas ekwindla edlule, umbhali oyedwa weGlamour wayedinga ukuba nawo. Nakhu lapho ungazithengisa khona manje.
Usaziwayo Ohamba Phambili Ubheka iWimbledon 2018
U-Emma Watson, uJessica Biel, uJustin Timberlake noDrake bonke bebengabanye bosaziwayo abebehambele umqhudelwano waseWimbledon walo nyaka.
Izithombe ezi-8 Zentombazane Yokuzalwa u-Angelina Jolie Ebukeka Njengentombazane Yokuzalwa Yokugcina
U-Angelina Jolie omuhle ngokumangalisayo uneminyaka engama-39 namuhla, futhi ngigubha ngokuqoqa ezinye zezithombe lapho ebukeka emuhle kakhulu ngosuku lokuzalwa. Ukugqoka kahle, ukumamatheka okubanzi, nabo bonke abakuzungezile bajabule. Ngakho-ke yize kungekho kulokhu okuvela emikhosini yakhe yangempela, ulingana nenqubo yami (ngijabule nakokunye okuhle) kulowo nalowo kubo. Ingubo yokuphuma ebusuku yentombazane yakudala yokuzalwa (ama-sequin futhi agqamile) isebenza naku-Angelina naye, owakhetha le-LBD ye-premiere kaSawoti emuva ngonyaka we-2010. Kodwa uqobo, uma bengiyintombazane yezinsuku ezingama-b futhi ngibe yisihlabani se-mega movie , Ngangeqa ingubo yephathi ngivuna okuthile okukhangayo futhi okungcono ngesitimela eside kakhulu. Faka le nombolo kashokholethi abeyigqoka e-Cannes ngo-2011. Ngingathola nendawo yephathi ehlanganisa izitebhisi ukuze ngibe sesimweni esihle sokuyibukisa. Akabukeki njengowesifazane onamandla ohambahamba endaweni ethile enhle kakhulu ngesidlo sokujabula se-chic kule nombolo emnyama efanelekile? Kepha uma ngazi u-Angelina (yize kunjalo, angazi), ngicabanga ukuthi angakhetha usuku nomndeni wakhe esidlweni sakusihlwa esimnandi noma yimuphi unyaka. Izingcezu ezikhululekile, ezilula futhi ezimnyama zibonakala zenza isignesha yakhe engekho emsebenzini
I-31 Januwari Imibono Yokugqoka, Ehlelwe Abahleli beGlamour
Kwe-Self-Expression Issue yethu, sinezisebenzi ezingama-31 zamaGlamour zokuxuba nokufanisa nezinto ezifanayo eziyisihlanu okufanele zibe nazo. Chofoza ukuze ubone ukuthi baqhamuke nani!
13 Iziphesheli Zesikhwama Esimnyama SangoLwesihlanu & Iziphesheli Ongazilahleka: INordstrom, iTory Burch, uRebecca Minkoff
Ukusuka kuleso sikhwama se-Chloé crossbody kuye ku-Chanel wevintage ongandile, nazi izikhwama zesikhwama zango-2019 Black Friday namadili esikhwama ukukusiza ukuthenga amaholide.
I-Ugg Ishintsha Amabhuzu Asezimvu Athandwa Kakhulu Ngale Ndlela Entsha, Emelana Namanzi
Zonke izindaba ezimayelana nezicathulo zezimvu ezintsha ezingamanzi namabala ezingazweli ze-Ugg. I-Ugg inqamula amabhuzu ayo e-Classic athandwa kakhulu ngesitayela esisha sesikhumba semvu esinokunyathela okungcono nesikhumba semvu esiphathwa njengamabala namelana namanzi.
Bheka amaJean Ballroom, amabhulukwe anegumbi elingaphezulu lezinto zakhe ...
Lapho i-dude iqala ukufafaza ekhabethe lakhe nohlobo lwe-gusto oluvame ukubekelwa abakaki bebhola lezinyawo, ngijwayele ukulalela. Ngakho-ke lapho umngani womyeni wami echitha ibhulantshi yoSuku Lonyaka Omusha esitshela ukuthi uyithanda kangakanani 'iBallroom Jeans' yakhe, ngangilokhu ngizibuza ukuthi yini le ayidinga i-denim formalwear. Kuyavela ukuthi basho lonke uhlobo oluthiwa 'lweBallroom' ... Hlangana nomkhiqizo ohlekisa kakhulu engake ngawubona eminyakeni edlule - iBallroom Jeans yakwaDuluth Trading Co., ene-'Crouch Gusset 'enelungelo lobunikazi' lenkululeko ukunyakaza. ' Ayikho nje indlela efana neyomfazi yokusho lokhu: La mabhulukwe anendawo eyengeziwe yomuthi wakhe. Bheka lezi zimakethe ezihlekisayo ukuze uzibone zisebenza: ngiqonde ukuthi ... ungakwenza lokho? Uma ngicabanga ukuthi kuyinkinga eyingqayizivele yabesilisa, angikwazi ukusho ukuthi lezi zingenangqondo yini njengoba ngicabanga ... futhi banesilinganiso sezinkanyezi esingu-4.5 / 5 kusuka kuzibuyekezo zamakhasimende ezingaphezu kwe-1,700 kusayithi labo, ngakho-ke mhlawumbe entweni ethile? Ngabe ucabanga ukuthi umfana wakho angaze agqoke lezi zinto? Ake sizwe!
UMadewell Ukhumbula Izitayela Ezimbalwa Zembadada Ngenxa Yenkinga Yezokuphepha
Izindaba ezibalulekile uma uthenge izimbadada eqoqweni lakwaMadewell's Sightseer ezinyangeni eziyisithupha ezedlule: Inkampani ikhumbula ngazimbili ama-50,900 e-U.S naseCanada ngenxa yenkinga yezokuphepha. Ngokusho kweWWD, izicathulo zalo mkhiqizo eziqhamuka eqoqweni iSightseer, ezithengiswe phakathi kukaFebhuwari noJulayi 2015, 'kutholakale ukuthi ziyingozi ngoba i-shank yensimbi ingasusa futhi ingene ngaphansi kwe-outsole, okubeka ingozi yokuwa,' kwiKhomishini Yezokuphepha Yomkhiqizo Wabathengi yase-US. Akukho ukulimala okubikiwe. Izimbadada zithengiswe ezitolo zakwaMadewell, ku-inthanethi ku-adewell.com, noma ku-inthanethi ku- shopbop.com, zisuka ku- $ 60 ziye ku- $ 80. Izitayela eziqondile zifaka phakathi: Izimbadada ze-C0275 Sightseer Knotted Slide C0276 Sightseer T-Strap Thong in Black Leather C0277 Sightseer T-Strap Thong Sandals in Metallic Colour-Block C0278 Sightseer Buckle Gladiator Sandals C0279 Sightseer Slide Sandals C1105 Sightse Sightse C1105 Sightse -Loop Sandals C5895 Sightseer Ankle-Wrap Sandals in Shiny Silver C5897 Sightseer Lace-Up Sandals C6090 Sightseer Ankle-Wrap Sandals in Metallic Sand Uma ungumnikazi walezi zitayela, yeka ukuzigqoka ngokushesha bese uthinta uMadewell ngokushayela u-866-544-1937 noma nge-imeyili 24/7@madewell.com. Ngemininingwane engaphezulu, hlola ku-www.madewell.com bese uqhafaza ku-'Isaziso Esibalulekile. '
Izimfihlo Zesitayela Eziyi-15 Zokuntshontsha Amantombazane Anamajika
Imibono ethopha imidwebo yesitayela sakho sehlobo nekhabethe.
Izembatho ezinhle kakhulu ze-Cocktail zokuthenga manje
Noma ngabe ungumuntu ogqoka i-LBD ojabulayo noma umuntu onentshisekelo entweni engcono kakhulu elandelayo, nakhu lapho ungathenga khona ingubo yakho elandelayo yobukhulu be-cocktail.
Bona Amanye AmaRoyals Agqoke Kakhulu Emhlabeni ku-One Big Party
Uma kukhulunywa ngesitayela sobukhosi, kunedlanzana lamantombazane elihlala likhala wonke umuntu. UKate Middleton, kunjalo, kepha futhi noQueens Letizia noMaxima, kanye neNkosazana uMary. Inkosikazi ngayinye ingamandla amakhulu esitayela ezweni lakubo, kepha kuyaqabukela sibabuke kancane bebukeka bebahle bonke ndawonye. Lokho kuguquke nje, ngenxa yephathi ebabazekayo yama-75 yokuzalwa kweNdlovukazi uMargrethe II waseDenmark (kodwa ngokujulile-lawo ma-tiara!). Inkosazana uMary owazalelwa e-Australia ugubhe usuku lokuzalwa lukamamezala wakhe egqoke ingubo epinki enoshukela ewele emahlombe akhe. Uma konke ukushaya kwakhe kubukeka kujwayelekile, kunesizathu: Wafaka ingxenye yako esithombeni sakhe esisemthethweni. Indlovukazi yaseSpain uLetizia ibilokhu iqhubeka nokuthola isitayela esihle selokhu yagcotshwa ehlobo ehlobo. Ngokwalo mcimbi, uphumele ngaphandle kwebhokisi eliqinile, wakha ingubo emnyama enamhlophe. Waziwa umhlaba wonke ngokunambitheka kwakhe, iNdlovukazi uMaxima akazange adumazeke ngengubo emnyama eneziphetho namadayimane amaningi. UPrincess Marie waseDenmark wenze isitayela sobukhosi sakudala, egqoke izintambo zasolwandle ezinemikhono esihlakaleni. Yimuphi wasebukhosini ogqoke kahle othanda ukukhethelwa isitayela esihle kakhulu?
I-Stuffers Yesitoko Esesabekayo, Ngoba Yingxenye KaKhisimusi Ehamba Phambili, Noma kunjalo
Ukukhethwa kwama-stocking stuffers, kusuka ebuhleni kuya kuzinsiza kuya ezindlini, ukuthenga ngalesi sikhathi samaholide.
Ama-Swimsuits ama-50 Uzozizwa Ukhululekile Futhi Uqinisekile Kuleli hlobo
Ukusuka kusicucu esisodwa kuya kuma-bikinis, sithole amasudi okugeza ama-chic amahle angama-50 alingana kahle futhi azokwenza uzizwe uqiniseka emzimbeni olwandle.
I-Rant esheshayo: Singakwazi Yini Ukuthatha Umhlalaphansi Amaphampu Amnyama Kukhaphethi Obomvu?
Iqiniso: Kunezicathulo eziningi ezinhle ngokumangalisayo laphaya. Iqiniso: Uma ungusaziwayo wohlu lwe-A, unakho ukukhetha kwakho noma yiliphi ibhangqa ofuna ukuligqoka. Iqiniso: Waaaaay abaningi babo basebenzisa amaphampu amnyama amadala lapho beshaya ukhaphethi obomvu.
Izindlela eziyi-10 Zokuzama ngo-2014
Sethula imibono yemfashini esiyivumelayo onyakeni wakho ozayo. Azikaze zibe khona izindlela eziningi kangaka zokubukeka kumangalisa kangaka!
Vuselela ikhabethe lakho lokuwa ngalezi zingu-20 ezinhle kakhulu
Letha ikhabethe lakho lapha futhi manje nalokhu okutholayo okwamanje.
Yonke i-Grammy After-Party ibukeka sengathi iyathandeka, ifaka amaKardashians, uRita Ora, noMiranda Kerr
Izingubo zangemva kwephathi ziyathandeka ngoba, empeleni, sibheka ukuthi ama-celebs akhethe ukuzijabulisa ini, hhayi nje ukubukeka okuhle esithombeni sikakhaphethi obomvu opp. Kubukeka sengathi uhlu lwami oluningi olugqoke kahle kakhulu lweGrammys luye ekhaya ukuyophumula, ngoba angibonanga ithani lalawo makhosikazi ngaphandle nangaphandle. Esikhundleni salokho, ukubukeka okuhle kakhulu kwasebusuku kunobuso obusha. Udadewethu omkhulu uKim Kardashian wayenenye yezingubo zami engizithandayo ezivela emcimbini omkhulu, kepha odadewabo uKendall noKylie Jenner noKhloe Kardashian bakuthuthukisa okuthile okungathi sína kamuva. Womathathu la mantombazane anyakazisa iKardashian M.O ejwayelekile. ezinde nezinama-slinky ezinama-plunge ajulile kanye nama-slits aphezulu. Okunye okumele kukuqaphele: Kubukeka sengathi uKylie ushiye ukuzenza kwakhe njengoKim ekhaya ekhaya kusihlwa. Le ngubo kaSteven Khalil ibukeka ngendlela ecishe ifane nohlobo lwesitayela alinyakazisile onyakeni owedlule. URita Ora ushintshe ingubo yakhe yesiliva ecwebezela kakhulu, futhi kufanele ngikutshele: Ngithanda le silika ephrintiwe ngokugqamile iDsquared2 mini kangcono. Ivolumu yenzela isithombe esihle, futhi uma uzophonsa iziphuzo ezimbalwa bese udansa, ngicabanga ukuthi siyazi ukuthi iyiphi ingubo elungele lo msebenzi.
Ungasigqoka Kanjani Isiketi Eside Sobude Futhi Ungabukeki Njengomtapo Wezincwadi (Kukhuthazwe Ngumsebenzi Wobuhle!)
Yayimnandi kanjani iGlamour Web Intern, Lane Florsheim, ukubukeka kokuthunyelwe kwethu kwezingubo zasehlobo?
Ogqoke Okugqamile Emcimbini Wentsha yeHollywood Hollywood Yentsha: Votela Manje!
Abalingisi baseHollywood abasafufusa baphume bonke (ngendlela efanele iminyaka yobudala) yephathi yaminyaka yonke yentsha Vogue izolo ebusuku.
Izinkomba ze-Closet ezingu-9 zokuthi uyi-Aquarius yakudala
Kuwo wonke amantombazane e-Aquarius Glamour: Usuku lokuzalwa oluhle! Ngoba ngikholwa ukuthi kukhona ukubekwa kwewebhu okuyi-cosmic zodiac okuholela ekufaneni, ngihlanganisa uhlu oluzoba uhlu lwezinto engibheja ukuthi uzishiyile ekhabetheni lakho noma engubeni. Lolu lwazi luza ngomusa wochwepheshe bezinkanyezi uSusan Miller, othumele zonke izinhlobo zezindatshana ezimnandi engizicwaningile (futhi, uyisishoshovu ngemuva kwamavidiyo ethu amahle kakhulu ezinkanyezi ezihambelana nosuku lomuntu — zihlole uma ungakenzi lokho!). Uma ungeyena u-Aquarius, bona ezinye izimpawu engibhale ngazo lapha. Uyazi ukuthi uyi-Aquarius uma ikhabethe lakho ... 1. Kukhona okuluhlaza okwesibhakabhaka okugqamile noma okugqamile okunombala obomvana onsomi. Nge-Miss Miller, imibala yakho emihle kakhulu yi-cobalt ne-fuchsia, futhi manje kungenzeka ukuthi uqoqe izingcezu ezimbalwa ozithandayo. 2. Ubucwebe besitatimende budlula ubucwebe, izingcezu ezilula. 'Kunokwehluka ngalona wesifazane wase-Aquarius, futhi uhlala ehlukile kancanyana, emaphethelweni ezinto ezintsha nezishisayo,' kubhala uSusan, futhi lo muzwa usebenza ekuthandeni kwakho ubucwebe. Awuyona intombazane eneketanga legolide elincanyana noma ibhande elibucayi. Esikhundleni salokho, imigexo e-chunky kanye nezinduku zokungazisa nezindandatho ze-cocktail zifuna isikhala emgqonyeni wakho wokufinyelela. 3. Okuthile kunokuxhumeka kobuchwepheshe.
i-bob emfushane yaseFrance enama-bangs
izinkathi zemfundiso ye-big bang
iziphetho zochungechunge olubi kunazo zonke
kanjani ukuqeda ama-blackheads nama-pores amakhulu
kanjani ukufuthelisa ubuso ukususa amakhanda amnyama